Bambalwa kubantu abavakashela Amsterdam ngenxa wedwa, izinkambo kanye ezikhangayo. Inhloko-dolobha ye-Netherlands isikhathi eside kwaziwa ngoba indlela yalo nabayiziminzi ukuphila. Ngaphezu ngekota Red (omdala ukuzijabulisa), ungathola mnandi futhi kancane obuseduze. Coffeeshops e-Amsterdam - umzila ejwayelekile kwezivakashi. Abanye bavela lapha kuphela ukuze uzame Muffin ezijabule noma okungathí sina.
Kulabo abazi, coffee shop - kule ndawo e-Amsterdam lapho ungakwazi ngokomthetho ukusebenzisa izidakamizwa. Ezweni lonke, lezi "zokudla" ezingaphezu kwenkulungwane. Ngaphambili, iziphathimandla zedolobha ukubeka ugwayi katiki ukuba abanikazi ezitolo zekhofi noma utshwala noma izidakamizwa. Manje, lapha ungathola iziphuzo Cola kuphela, ikhofi kanye juice. Ezinye izindaba zika-imenyu zingahlukaniswa zibe izikhundla ezimbili: insangu insangu. Ngesikhathi ibha kukhona izikali uhla lwamanani.
Kufanele kuphawulwe ukuthi kunomehluko phakathi coffeeshops futhi smartshopami. Inketho zokugcina - kungcono esitolo ukuthi uthengisa amakhambi okwelapha ezinethonya kwezidakamizwa. Ukuhlola ukuthi yimaphi ama coffee shop e-Amsterdam unesidingo ukubheka iwindi. Iziphathimandla ziye zaphoqeleka ukuba beka esiluhlaza-white efasiteleni, othi isikhungo wavunyelwa ngokomthetho.
ngezigaba Esemthethweni, Lutho neze. Kodwa esitolo ikhofi abantu e-Amsterdam ingahlukaniselwa zibe izinhlobo ezintathu. Okokuqala, mhlawumbe ethandekayo kakhulu. Waqamba Chill out. Ezindaweni ezinjalo ebusa omuhle kakhulu eziphumulele. Umculo uhlale uzolile. Izivakashi sebejabulela ikhofi kanye intuthu. Lokhu kufanelekile coffee shop kanye kuphela, futhi inkampani ezinomsindo. Abanye bavela lapha nje ngci.
Uhlobo elilandelayo - a "enomsindo" isikhungo. Kukhona njalo umculo udlala elikhulu umdanso isitayela. Yokuthi labo ngibhema kungavela off ngokugcwele. Ngo iningi izikhungo ezifana bangathengisa utshwala, noma ngotshani kungcono ukuba baphuze. Ngokuvamile, lezi coffeeshops njenganoma iyiphi club-European, kodwa lapho ngokomthetho ukuthengisa insangu.
Uhlobo lwesithathu - "kokungathathi hlangothi" isikhungo. Awakwazi isibaluli coffeeshops asemkhathini, kodwa akukho inomsindo kakhulu. Lapha udlala umculo othandwayo, futhi nje adayise izidakamizwa. Ungase futhi uphuze ubhiya. Nakuba futhi wayengasho into efanayo, utshani kungcono azihlanganise utshwala.
Izivakashi, owaqala weza eNetherlands, kubalulekile ukufunda kahle libuyekeza kwezikhungo ezifana. Yiqiniso, coffeeshops best Amsterdam kukhona enkabeni yedolobha. Kodwa kumelwe siyaqonda ukuthi kukhona njalo agcwele lenqwaba izivakashi. Ngaphezu izikhungo emaphakathi akasoze akwazi buthule bese uphumule.
Hhayi ukhululekile, kodwa ethandwa
Labo abaye anquma okokuqala ukuvakashela endaweni enjengale, kubalulekile ukuba ukhohlwe coffee shop "Bulldog" (Amsterdam). Kuyinto izikhungo endala futhi ethandwa kakhulu enethiwekhi. Kuhlanganisa 5 ikhofi izitolo, ambalwa zokudlela evamile ngisho ehhotela. Yiqiniso, izinga lomkhiqizo has wathula. Ayikho izikhalazo ezivela izivakashi asikaze. Kodwa uma ucabangela ukuthandwa lokhu coffeeshop, enokuthula emkhathini lapha akukhona ukulinda.
Ngokuvamile, ukuthola indawo ukhululekile akulula kanjalo e-Amsterdam. Abraxas ngeke ukujabulisa bonke abantu. Noma kunjalo, indawo yayo kufanele uqobo. Lapha ukuya esigcawini main nje imizuzu embalwa. Ubukhulu kule ndawo kukhona amazing. Lapha, njengoba abaningi ezintathu ukuphakama, yilowo nalowo kubo egumbini. ingilazi Uphahla lwangaphakathi. Esitezi phezulu abanikazi sikhule Hemp sezihlahla. Ngisho noma ungafuni ukuba bawe ngaphansi kwethonya izidakamizwa, woza lapha nje ukuthatha isithombe.
Kodwa iqiniso lokuthi uthanda connoisseur wangempela ikhofi izitolo - lokhu intethe. Le ndawo yokudlela imaphakathi, kodwa ayihambisani neziyaluyalu ukuthutheleka nenqwaba yabantu. Lapha, ukukhanya, ethule futhi ezolile. Kule ndawo atypical ngifuna ukuhlala isikhathi esijana.
"Little," nge idumela
Coffeeshops Gray Area idume phakathi izivakashi nezakhamuzi. Lena isikhungo esincane kakhulu, nesebenzela ubusuku nemini. Isici esiyinhloko le ndawo ifulegi American futhi iwashi ekuboniseni 4:20 njalo. Kube ngokuvamile ukuzwa idwala American. Kodwa lokho akuyona yonke iphuzu. Rumour has it ukuthi lokhu lapho utshani ezekhethelo ukudayiswa "endaweni yonke." Lokhu kuqinisekiswa Izibuyekezo zezivakashi kanye nezakhamuzi zendawo wathi.
Ngasekuqaleni kwale ndawo kwaba ibha enkulu ngokuthengisa sasekuseni okumnandi Barney sika Breakfast. Manje kuyinto coffee shop okuhle, ilahlekelwe kusihloko salo igama elithi "ibhulakufesi", njengawo ukudla liphumile imenyu. Indawo kuthandwa kakhulu, kodwa futhi ngokuvamile ezazizinkulu ngokwanele. Isibhakabhaka kuyinto ethokomele Nokho, kodwa okumatasa. Akuwona wonke umuntu uyobe othanda it. Uyoba yini ngempela ukuheha izivakashi kanye imenyu zikanokusho. Lapha ungathola izinhlobonhlobo ethandwa kakhulu utshani.
Yini okukhethwa kukhona?
Izivakashi ukwazi ukuthi sipho coffeeshops ye-Amsterdam. Imenyu futhi ngezinye izikhathi kube ngempela ezingalindelekile, yingakho amehlo imfundamakhwela ukusebenzisa. Kulokhu, udinga ukuba uthintane abasebenzi ke ukuze kungabi kubi.
Ezinye izindaba zika-imenyu ungathola izikhundla ezine: Amalunga, Weed, insangu Space Angenamvubelo.
Inketho yokuqala - kuba usikilidi. Bayidayise noma ibhokisi elincane noma ibhokisi. Singasho ezazigxishwe Izingxube ezihlukahlukene, ngakho-ke Kubalulekile ukubuza. Kungcono ukuthenga umhlambi khulula amanyela. Kuyinto ihlanzeke kakhulu, kodwa namandla. Omunye osikilidi ingaba anele 3-4 abantu, ngakho izindleko 3-9 euro kuyoba funny nemnandi enjalo.
Insangu - lokhu into ukuze nakho. ikhemikhali ekhiqizwa kusuka insangu resin. Futhi unamandla kakhulu futhi saqala bangaba kakhulu "engumbulali." Izindleko ziyahlukahluka, kodwa isilinganiso imayelana 10 euro igremu elilodwa.
Into elandelayo on the imenyu - amakhekhe "magic". Ziyazi mayelana yamafilimu. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi lena okufana ayinangozi kakhulu into kwezidakamizwa. It kuvela ukuthi ikhekhe nge insangu - into esikhohlisayo. Lapho ubhema lo imbiza, umphumela kwezidakamizwa iqala ngokushesha. Kodwa kuze kube ikhekhe kugaywe, inhloko bangase banqume ukuthi le umthamo akwanele, futhi kuyodliwa isizwe ambalwa ngaphezulu. Khona-ke umphumela ungaba namandla futhi iyingozi.
Inketho nephephile - kuba utshani isisindo. Okokuqala, ungathatha kakhulu ngendlela ungakwazi uqede ngokwakho. Kukhethwa izinhlobo kuphezulu kakhulu. Inani elilungisiwe zokhahlamba kusuka 8 kuya ku-12-euro. Kodwa kuwufanele sinake ezihlukahlukene utshani. Ukuze le ntengo, ungathola 0.5 amagremu kohlobo olulodwa noma 1.5 - ezahlukene.
By the way, ngesikhathi ungakwazi ukuthenga 5 amagremu. Kodwa uma unquma ukuba baphule kwamasiko ke ngesonto noma amagremu ababili bayoba baningi. Yiqiniso, uma ufuna asemkhathini, vakashela kangcono coffeeshops e-Amsterdam. Amanani nazi ngokulinganisela, futhi ukwazi ukufihla kusukela izakhi esiyi ethokomele. Nakuba kukhona okunye ukukhetha ezokuzijabulisa.
Elingekho emthethweni, kodwa ...
Njengoba umthetho ngawo ukuthatha iNetherlands, udle utshani kuphela ezikoleni ezikhethekile, okungukuthi, e coffeeshops. Uma uthenge izidakamizwa futhi nje ufuna ukukhombisa zibayise, ungakwenza ezindaweni zomphakathi. With ungaba kufika ku-15 amagremu utshani.
Ekusebenteni, kuvela konke ngokuhlukile kancane. Amaphoyisa waphenduka amehlo yokuthi izivakashi kanye bendawo kungaba afuthe utshani khona kanye enkabeni yedolobha. Noma kunjalo, kunezizathu namazinga ukufaneleka okumelwe ahlangabezane nazo kulabo Amsterdam ukuza. Coffeeshops izivakashi - lena indawo yokuqala futhi, isimiso, kuphela lapho kungenzeka ukusebenzisa izidakamizwa. Kodwa uma ngokungazelelwe wena ahlupheka emgwaqeni, ungabhemi e zokudlala, ezokuthutha zomphakathi izitobhi futhi izindawo zokulala.
Futhi, akukuhle ukuba ulinge angaphandle kwenhloko-dolobha. Kukhona ungakwazi ukubopha ngempela. Nokho, awukwazi ubheme emahostela, amahhotela nezindawo zokudlela.
Ngokuvamile coffee shop e-Amsterdam ifakwe wonke amathuluzi adingekayo ukuthi kuzosiza sebenzisa uthenge. Uma unqume bebodwa ukuze ujabulele utshani ke udinga ukukhetha indlela "ekubhujisweni" zalo.
Esiwusizo futhi fast indlela - ilunga. Ungathenga usikilidi ngomumo eyenziwe noma ukuthatha insangu ngobuningi futhi ijikise e izicubu paper.
Ungasebenzisa ifoni. i samuntu okunjalo kufanelekile aesthetes yangempela. I amashubhu zenziwa ngokhuni, metal, ingilazi. Kodwa inkinga ye le ndlela wukuthi ukusetshenziswa okunjalo kuyingozi kakhulu.
Kusalokhu ethandwa futhi bong ingilazi. Ukusebenzisa ilula futhi ewusizo. ukuhlunga futhi Water epholisa intuthu. Resin zonke imali kwi ezindongeni umkhumbi. Kufanele uthole imizwelo eyakhayo kuphela.
Nokho, indlela eziphambili kakhulu - vaporizer. Le divayisi futhi ayinangozi. Akazange umlilo, futhi vaporizes into. Ngakho-ke, akukho itiyela carcinogens akukwazi. Kodwa lokhu lula ukukhokha, ngakho evaporator kuwufanele 100-200 euro.
Njengoba kushiwo ngaphambili, izivakashi eziningi beze kuphela ukuvakashela esitolo ikhofi (Amsterdam). Izibuyekezo yalezi izikhungo zihlale omuhle. Lokhu kuhlobene izinga kwezimpahla, kanye neqiniso lokuthi lezi zifiki ozama izihlalo pre-khetha. Abanye bathanda emkhathini esinomsindo umculo okhalela phezulu, kungilapho abanye bakhetha indawo egumbini lokuhlala kanye nenduduzo.
Kunoma ikuphi, zonke coffeeshops wezomthetho Amsterdam like izivakashi kakhulu. Amanani enengqondo izidakamizwa. Ezikhungweni eziningi esimweni nice abasebenzi friendly.
The best ukuzilibazisa Adler: incazelo, isithombe
Kurgan: Izikhangibavakashi, incazelo kanye isithombe sabo
Gorbachev Biography: ukulandisa okufutshane
Amanoveli zomlando: A uhlu lwezincwadi, incazelo, umbhali, futhi umfundi Izibuyekezo